Imandarmedia.com: स्लिम बन्न डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् ७ सुझाव
Lifestyle, Lifestyle News » स्लिम बन्न डाइटिङ गर्दै हुनुहुन्छ ? पढ्नुहोस् ७ सुझाव
त्यस्तै खाना खानेबित्तिकै सुत्दा तौल बढ्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ । खाना खाएको १\_२ घण्टासम्म नसुत्ने, हिँडडुल गर्ने वा अन्य काम गर्नु पर्छ । राति ढिलोमा १० बजे सुत्ने र बिहान उज्यालो हुनुभन्दा एकघण्टा अगाडि उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
सबैलाई एकैप्रकारको व्यायाम सहज नहुन पनि सक्छ । त्यसैले व्यायाम गर्दा सम्बन्धित डा. तथा विशेषज्ञको सल्लाहमा व्यायाम गर्नु पर्छ । व्यायाम गरि सकेपछि राति भिजाएर राखेको देशी बादाम दूधमा राखेर खान सकिन्छ, जसले स्वस्थ स्फूर्तीका साथै तौल नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । स्वास्थ्य खबर
२०७३ पुस २५ गते प्रकाशित ।